တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် H.E. Mr. Hiroto IZUMI အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် H.E. Mr. Hiroto IZUMI အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် H.E. Mr. Hiroto IZUMI အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့် ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်သူများမှ ရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနိုင်ရေးအတွက် တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေများနှင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသမှ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည် လက်ခံနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ နည်းပညာ ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ကဏ္ဍများအား မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှ တစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဂပြနျနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ၏ အထူးအကွံပေးပုဂ်ဂိုလျ H.E. Mr. Hiroto IZUMI အားလကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော၊ မတျ ၂၁
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ဂပြနျနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ၏ အထူးအကွံပေးပုဂ်ဂိုလျ H.E. Mr. Hiroto IZUMI အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါ တှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျော ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ညှိနှိုငျး ကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ဂပြနျနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ၏ အထူးအကွံပေးပုဂ်ဂိုလျ နှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့ တှဆေုံ့ရာတှငျ ပွညျသူမြားမှ ရှေးခယျြသညျ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျး ပျေါတှငျ လြှောကျလှမျးနိုငျရေးအတှကျ တပျမတျောမှ ဆောငျရှကျခဲ့မှု အခွအေနမြေားနှငျ့ ထာဝရ ငွိမျးခမျြးရေး ရရှိရနျအတှကျ ဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတောဒသေမှ တဈဖကျနိုငျငံသို့ ထှကျခှာသှားသညျ့ ဘင်ျဂါလီမြားအား ပွနျလညျ လကျခံနိုငျရေး ဆောငျရှကျနမှေုနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး အတှကျ ဂပြနျနိုငျငံမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ ဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျရေး အတှကျ စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍ၊ နညျးပညာ ကဏ်ဍမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးနှငျ့ ကုနျသှယျရေး ကဏ်ဍမြားအား မွှငျ့တငျ ဆောငျရှကျရေး၊ နှဈနိုငျငံ တပျမတျော နှဈရပျအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမှ တဈဆငျ့ နှဈနိုငျငံ ခဈြကွညျရငျးနှီးမှု မွှငျ့တငျဆောငျရှကျရေး ဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
၂၀၁၉ ခုနှစ် သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ဆက်ကပ်ပူဇော်ပွဲနှင့် ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် H.E. Mr. Hiroto IZUMI အားလက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးအတွင်းဝန် H.E. Mr. Sanjay Mitra အား လက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)